Home News Xildhibaan Jeesoow”Qaraxa gaarigeeyga lagusoo xiray waa uu ahaa mid lasoo qorsheeyay!
Xildhibaan Jeesoow”Qaraxa gaarigeeyga lagusoo xiray waa uu ahaa mid lasoo qorsheeyay!
Xildhibaan Daahir Aamiin Jeesoow oo duhurnimadii maanta ka badbaaday qarax gaarigiisa loogu xiray ayaa warbaahinta kaga warbixyay sida uu qaraxaasi u dhacay.
Xildhibaanka ayaa sheegay in qaraxaasi lala damacsanaa in lagu qaarajiyo balse uu ka badbaaday maadama xiliga uu qaraxa dhacay uusan saarneyn gaariga, waxa uuna sheegay in qaraxaaasi uu ahaa mid weyn balse gaarigu uusan khasaaro sidaas u badan uusan soo gaarin.
Waxa uu sheegay in garaxa uusan aheyn mid mar sii horeysay lagu xiray gaariga balse uu ahaa qarax loogu dhajiyay gaariga inta uu xildhibaanka uu ka maqnaa gaariga uuna ku dhaawacmay daroowalka gaariga u waday.
Xildhibaan Daahir Aamiin Jeesoow ayaa saraakiisha amaanka Magaalada Muqdisho ugu mahadceliyay sida ay ugu soo gurmadeyn isagoo sheegay in amaankiisa ay sugeyn gaarigiisana ay goobta ka qaadeyn.
Previous articleBarakac xoogan oo ka socda deegaanka Soomaalida Itoobiya (ogoow sababta)
Next articleNin dalaal ahaa iyo xaaskiisa oo lagu dilay Magaalada Muqdisho
Aamro culus oo la dul dhigay Askar iyo Saraakiil ka tirsan...
Muuse Biixi oo berri si rasmi ah furi doona safaaradda Soomaaliland...